PressReader - Ilanga: 2018-10-25 - Babuyisa isithunzi sombhaqanga
Babuyisa isithunzi sombhaqanga
Bathungatha amaqembu abesifazane ashaya lo mculo
Ilanga - 2018-10-25 - Izindaba - SAZI KASIPHO
BAZOQALA umkhankaso wokuthungatha amaqembu abesifazane ashaya umbhaqanga, bawaqophe, abagqugquzeli bemicimbi yalo mculo ngoba bethi kungenzeka ukuthi kabanakwa nje, yingoba kubukeka sengathi into abayenzayo ngeyamadoda kuphela.
UNgelosi “Gudlugu” Mtshali ungomunye wabagqugquzeli abaphambili emkhankasweni wokuvuselela lo mculo odume eminyakeni edlule uculwa yiSoul Brothers, uDennis Gumede, iZintombi Zesimanjemanje, ukukha phezulu.
Uveze lokhu njengoba ngoMgqibelo kuzobe kudideka unwabu ngomswenko, kuguga iteku, amaqe-mbu alo mculo eshiyelana inku-ndla ehostela eThokoza, eThekwini.
Uthi manje yisikhathi sokuba bavukuze amaciko amasha esifazane kulo mculo ukuze ubuyelwe yisithunzi sawo sakudala.
“Njengoba sivala unyaka nje eThokoza, kuzothi uma kuqala unyaka ozayo, siphume umkhanka- so sifune intsha enothando lwalo mculo. Ngaphandle kwalokho, eThokoza sizobe sixwayisa abesifazane ngokuthi bangabekezeli bahlale nabesilisa ababahlukumezayo ngoba kugcina kunesiphetho esibi kakhulu, sebebabulala,” kusho uGudlugu.
Uthi bazobe bexwayisa nabantu abahamba ngezinyawo emigwaqweni ukuthi njengoba kuza amaholidi kumele bangeqi imigwaqo noma kanjani kwazise sekugcwele abashayeli abangenanembeza kwabahamba ngezinyawo.
Ukhale nangokudayiswa kwamaCD awumbombayi emigwaqweni, wathi lokhu kukhinyabeza amaciko, aphelelwe ngamandla okuqhubeka nokwenza umsebenzi osezingeni eliphezulu ukujabulisa abantu.
“Siyacela nakubahleli bemicimbi yomculo wesintu ukuba bangasishalazeli. Sengathi bangenza njengoba kwenza ubaba uBhodloza (Welcome Nzimande).
“Ngijabule kabi futhi ngiyabonga kakhulu kuyena njengoba ngoMgqibelo ubesimemile, kunguGudlugu noDali, siyocula emcimbini wakhe ohlelwa yiBhodloza Foundation eMgungundlovu.
“Kulo mcimbi kuneqembu lombhaqanga, Abancengi Bempi- lo, lona-ke ebeliyingxenye yawo ngokuphelele,” kusho uGudlugu obonge uMnu Sipho “Skiri” Mkhwanazi okunguyena onikela ngesandisamsindo ( sound system) futhi nguyena onikele ngestudiyo esizoqopha amaciko esifazane.
Amaqembu azobe eshiyelana inkundla eThokoza kubalwa iNkosi Yomgxobanyawo, uMashwabana, uGudlugu, Abakhwenyana, oMapendane, Odali, Ababekezeli, Sandile Khwela, Abadobi, uMammngo noDennis Gumede.
BAZOSHAYA abadume ngazo oMapendane okuyiqembu laseVillage, ngaseChatsworth.
UGUDLUGU (oqosheme) nezakhe bazobe benandisa ngoMgqibelo ehostela eThokoza, eThekwini.
ABAKHWENYANA bazokhumbuza abathandi bombhaqanga izinsuku zakudala.